Tu Tu Tha: ရင်းစားစာ
Thursday, June 11, 2009 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Thursday, June 11, 2009 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ရည်းစားစာရေးပေးချိန်မှာ ၆ တန်း ၇တန်းလောက်ရောက်ပြီထင်ထားတာ...။
“နန်းညီ နင်တို့ထဲမှာ ဆရာကြီး ဘယ်သူလဲ ပြောစမ်း”
တူးတူးသာ ပါ . .ဆြာမ................
ဆရာကြီး လက်ပိုက်... ပုဆိုးသေချာ မထား... ရွှမ်း ရွှမ်းဆိုပြီး ကြိမ်လုံးနဲ့ ဆော်ပလော်တီး ခံရတော့မှာ မြင်နေမိတယ်။
တော်တော်လေး ကိုရီလိုက်ပါတယ် မတူရာ...
ဆရာမကြီးက ဘယ်သူလဲ ကျမမေးဘူး။
ရယ်ရတယ်၊ ကလေးတွေ စကားပြောရင် သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ၊
၂၅ လောက်က အိမ်ဘေးက ၆နှစ် အရွယ်ကလေးမလေးက ပြောတယ်၊ မမက ဆယ်ကျော်သက်မို့လား တဲ့၊ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ သူ့မောင်လေး(၄နှစ်)က သူသိတယ်တဲ့၊ မမ က ၁၂နှစ် တဲ့၊ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ဒါက အရမ်းအိုနေပြီထင်တာလေ၊